प्रचण्डको फोनपछि वडाध्यक्षले तोडे अनसन – All NepalKhabar
आमालाई साक्षी राखेर उनले तत्कालका लागि अनसन तोडेका हुन्।
नेकपा अध्यक्ष तथा चितवन क्षेत्रका सांसद पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’ले उनीसँग फोनमा कुरा गरेपछि अनसन तोडेको उनले बताए।
मंगलबार सन्तोष पनेरूले फेसबुकमा पोस्ट गर्दै पौडेलको भनाइ राखेका छन्’मेरो निर्वाचन क्षेत्रको सासंद,मेरो अभिवाभक पनि हुनुहुन्छ,प्रचण्ड! उहाँसगंको टलिफोन संवादपछि, उहाँ माडीको यो न्यायको आन्दोलनमा आफ्नो ऐक्यबद्धता र अन्तिमसम्म साथ रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेपछि उहाँको विश्वासमा हात्ती पीडित आमालाई साक्षी राखेर,मेयर रेनु दाहाल समेतको उपस्थितिमा मैले तत्कालको लागि अनसन तोडेको छु! माडीको लागि विद्रोहको लडाइँ म अन्तिमसम्म लडिरहनेछु।’
छ दिनदेखि अनसनरत पौडेलको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिएपछि सोमबार भरतपुर अस्पतालमा भर्ना भएका थिए।
वडाध्यक्ष पौडेल विकास निर्माणका काम हुनुपर्‍यो भन्ने दबाब दिन अनसन बसेका हुन्। माडीवासी जनताका तर्फबाट आमरण अनसन बसेको उल्लेख गरेका उनले सात बुँदे माग राखेका थिए।